विभिन्न घटकका १० माओवादी पार्टी/समूह/व्यक्तिबीचको एकतापछि नेकपा माआवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड उत्साहित देखिन्छन् र उनको आत्मविश्वास बढेको छ । राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा देशकै पहिलो पार्टी रहेको दाबी गर्ने उनले संगठनमा पनि माओवादी केन्द्रलाई एक नम्बर बनाउने ‘मिसन’ चलाएका छन् । यसका लागि देशदौडाहमा छन् । भद्र सहमति र राष्ट्रिय सरकारको बहस पनि उनकै वरिपरि घुमिरहेको छ । आफूसँग डिभोर्स गरेर हिँडेका बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति नेपाल नामक पार्टीको औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन् । मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’चाहिँ प्रचण्डको कार्यदिशा र कार्यशैलीमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । राष्ट्रिय राजनीति र माओवादी आन्दोलनलाई आफ्नो केन्द्रमा राख्न सफल प्रचण्ड के सोच्दै छन् ? बुधवार बिहान आफ्नै निवास लाजिम्पाटमा उनले डिस्कभरी न्युज नेटवर्क डीएनएनसँग लामो कुराकानी गरे । डीएनएनद्वारा सञ्चालित रातोपाटी अनलाइनका लागि प्रधानसम्पादक ओम शर्मा, नेत्र पन्थी र राजेश भण्डारीले माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डसँग गरेको कुराकानीको अंश । ओह्रालोमा गुडेको तर ब्रेक फेल भएजस्तै हिँडेको गाडीसँग माओवादीको तुलना हुन्थ्यो । जेठ ६ गते १० माओवादी घटकबीच एकता भयो । अब तपाईंंमा केही आशा, अपेक्षा र विश्वास बढेको छ ?
यो सैद्धान्तिक कुरा तपाईंको स्कुलिङ पाएका कार्यकर्ताले बुझ्लान्, आजको दिनमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र मधेसवादीभन्दा माओवादीचाहिँ फरक के हो ? मानिसले एउटा कुरा सजिलै बुझ्न सक्छन्, त्यो के भने अहिले नेपालको सम्पूर्ण राजनीति माओवादी आन्दोलनवरिपरि छ । यो कुरा होइन भनेर कसैले भन्न सक्ने ठाउँ छैन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी, सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित मौलिक अधिकारका कुरा सबै माओवादीका एजेन्डा हुन् । भ्रम पारिएको छ, विभिन्न ढंगले भ्रम परेको पनि छ, म मान्छु ।
माओवादी संगठनमा तलदेखि माथिसम्म भद्रगोल छ, समस्यामात्रै देखिएका छन् । योखालको संगठन जसरी बनाउनुभयो, यसका बाध्यता आफ्ना ठाउँमा होलान्, अब यसले सुधारका लागि काम गर्छ कि, क्रान्तिका या चुनावका लागि ? यो संगठन कहाँनेर फिट हुन्छ ? मैले अघि भनेको दार्शनिक सैद्धान्तिक र राजनीतिक पक्षको तुलनामा संगठन भनेको सहायक कुरा नै हो । संगठन अहिले जस्तो छ, त्यसलाई तपाईंले भद्रगोल भन्नुभयो, त्यही भद्रगोलभित्रै गोल गर्ने माओवादी आन्दोलनको विशेषता हो । तपाईंले यो कुरालाई ध्यान दिनु भएन भने जहिले पनि केही भद्रगोल बनाएर नै गोल हुने गरेको छ । ०४६ को आन्दोलनपछि सबै पार्टीलाई जुटाएर १२ महामन्त्रीलाई मैले एकठाउँमा केन्द्रित गरेको थिएँ । मान्छे अचम्म परेका थिए ।
माक्र्सवादले जित्यो, हाम्रो प्रवृत्तिले जित्यो भन्नुहुन्छ तर किरण र बाबुरामले हामी नभएको भए जनयुद्ध नै हुन्नथ्यो भन्छन् त । हुटिट्याउँले आकाश मैले नै थामेको हो भन्छ भने त्यसको कुनै जवाफ छैन । इतिहासका तथ्यले बोलिरहेका छन् नि । बाबुरामलाई कसरी टिपेर ल्याएर हामीले पोलिट्व्युरोमा पुर्याइदिएको हो सबैलाई थाहा छ । सेक्टर काण्डपछि किरणको के हालत भएको थियो । हुटिट्याउँले भन्छ– त्यो कुरा पत्याउने मान्छेहरू पनि हुन्छन्, समाजमा त विभिन्न वर्ग छन्, विभिन्न प्रकृतिका मान्छे छन् । झुटै कुरा पनि पत्याउँछन् ।
पार्टीका सबै अंगले काम गर्दा मात्र नतिजा राम्रो आउने हो । अहिले तपाईं हिमालदेखि मधेस र पूर्वदेखि पश्चिम दौडिरहनुभएको छ । कार्यकर्तालाई काम दिनुको सट्टा आफैं किन दौडिरहनुभएको छ ? त्यो बेकारको कुरा हो, अहिले हजारौं मान्छे दौडिइरहेका छन् । म एक्लै गएर जनतालाई घर–घरमा भेटेको छु र ? चाहे मर्चवार भन्नुस् चाहे नेपालगन्ज, जहाँ जाँदा पनि हजारौं छटपटी भएको छ, मान्छे दौडादौड गरेका छन् । मैले हेर्दा सबै दौडन सुरु गरेका छन् । बीचमा पार्टी एकताभन्दा अगाडिको अवस्था अलि कम्प्लिकेटेड देखिएको थियो । खासगरी भन्नुहुन्छ भने दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएपछि हामी पार्टीतिर ध्यान दिन थाल्यौं । हामीले पार्टी पुनर्निमार्णलाई ध्यान दिन थालेदेखि आजसम्म आउँदा म एक्लै दौडेको छु भन्ने मान्छेलाई परेको छ । कुरा त्यसो होइन, हजारौं कार्यकर्ता असन्तुष्ट भएर पनि सक्रिय भएका छन् । सन्तुष्ट भएर पनि सक्रिय भएका छन् । तर, निष्क्रिय बसेका छैनन् । सबै दौडिइरहेका छन्, कोही केन्द्रीय समितिमा परेनौं भनेर दौडिइरहेका छन्, कोही पर्यौं भनेर दौडिइरहेका छन् । कोही पोलिटव्युरो र सेक्रेटरियट भनेका छन्, दौडिइरहेको देख्छु मैले ।
त्यस्तो विचार राख्ने पात्रसँग सहकार्य गर्दा कता–कता गइयोजस्तो लाग्दैन ? जानैपर्ने थियो । अर्को उपाय नभएपछि त जानुपर्यो नि ।
कहिलेसम्म पर्खनुहुन्छ त ? धेरै लाग्दैन । असार सुरु भयो । यो महिनाभित्रमा केही न केही किनारा लाग्छ ।
डा. बाबुराम भट्टराईको राजनीतिमाथि जान्न खोजेको, उपस्थित जे थियो र ओलीले एमालेलाई बाहेक अरूलाई धक्का दिन्छ भनेर जे टिप्पणी गरे । तपाईंको प्रारम्भिक टिप्पणी के हो, नयाँ शक्तिको औपचारिक घोषणापछिको ? पहिलो कुरा उहाँ जसरी जानुभएको छ, उहाँले एउटा कुरा स्पष्टै के भन्नुभएको छ भने क्रान्ति, माक्र्सवाद र हिजोको जनयुद्धबाट आफूलाई अलग्याउने ढंगबाट उहाँ जानुभएको छ । उहाँले जुन वर्ग समुदायलाई लिएर समृद्धिको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो भनेको कांग्रेस र एमालेको समानान्तर ढंगले पार्टी बनाउने प्रयास हो । तपाईं वैचारिक भन्नुस् वा मान्छे पात्र हेर्नुहुन्छ भने पनि के देख्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी धक्का एमालेलाई पुग्छ । उहाँले दिने धक्का कांग्रेसलाई हो, एमालेलाई हो । माओवादीलाई हुन्छ कि भनेर मानिसलाई परेको छ , बिल्कुल गलत हो ।
तपाईंले नेपाललाई विकास गरेर स्वीटजरल्यान्ड बनाउने भन्नुहुन्थ्यो । त्यो ‘प्याटेन्ट राइटस्’ त बाबुरामले लगेजस्तो लाग्छ कि ? मैले स्वीटजरल्यान्ड बनाउने भनेको सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा, मजदुर किसानको एकताका आधारमा भनेको हो । अहिले यो फेरि विकासको कुरा वा उत्पादनका लागि संघर्षको कुराचाहिँ बाबुरामजीको होइन । ‘रियालिटी’ माओवादीभित्रबाट हेर्नुहुन्छ भने हेटौंडा महाधिवेशनमा जे एजेन्डा पारित भयो । त्यो बाबुरामजीको मस्तिष्कको उपज होइन । त्यो पार्टीको हो, नेतृत्वको हैसियतले मैले त्यसलाई प्रस्ताव गरेपछि त्यो संघर्षतिर जानुपर्छ भनिएको हो । तर, अहिले साम्राज्यवादी विज्ञापनवालाले त्यो बाबुरामजीकै हो भन्छन् भने मेरो भन्नु केही छैन । तर, गम्भीर विश्लेषकले के कुरा देख्छ भने यो उत्पादनका लागि संघर्ष वा समृद्धिका लागि संघर्ष माओवादी आन्दोलनले सुरु गरेको एउटा नारा हो । यसमा बाबुरामजीले चिटिङ गर्नुभयो । उहाँले माक्र्सवाद लेनिनवाद, माओवादअन्तर्गत कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भनिएको हो । तर, यी सबै वाद परित्याग गरेर, कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै परित्याग गरेर त होइन । उहाँको अर्को कुरा के भने अर्को वर्ग जसविरुद्ध हाम्रो लाइन लक्षित हो, त्यही वर्गसँग मिलेर उहाँ त्यो कुरा भनिराख्नुभएको छ । त्यसकारण सारमा फरक भयो । उहाँले चिट गर्नुभयो ।